चीन ट्रोटिनेट इलेक्ट्रिक फ्याट टायर 10000W 84v फोल्डिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता र आपूर्तिकर्ता | हाइबा
ठूलो शक्ति मोटर इलेक्ट्रिक स्लाइड प्लेट
ट्रोटिनेट इलेक्ट्रिक फ्याट टायर १००००W ८४v फोल्डिङ इलेक्ट्रिक स्कूटर
72V डुअल मोटर 13 इन्च अग्लो...
तातो बिक्री छिटो 15000w विद्युत...
सबैभन्दा शक्तिशाली 15000w 84v...
7000w मोटर patinete इलेक्ट्रो...
ट्रोटिनेट इलेक्ट्रिक, प्याट...
यसको आरामदायी सवारी पनि यसको अविश्वसनीय निलम्बनमा आउँछ। यो डुअल कोइल-ओभर हाइड्रोलिक झटकाहरूसँग सुसज्जित छ जुन तपाईंको वातावरणमा समायोजन हुन्छ, आवश्यकता अनुसार नरमको बीचमा वैकल्पिक। यसमा एक अभिनव समायोज्य स्टीयरिङ डम्पर पनि छ। यस प्रकारको चीज धेरै सामान्य रूपमा पाइन्छ मोटरसाइकल तर k11 जस्ता उच्च-गतिको मेसिनको लागि राम्रोसँग काम गर्दछ, स्टेम र ह्यान्डलबारहरूलाई स्थिर गर्दै र तपाईंले इष्टतम 80 माइल प्रतिघण्टा हिर्काउँदा तिनीहरूलाई डगमगाउनबाट रोक्छ।
1 टुक्रा मूल्य: 2245 अमेरिकी डलर प्रति टुक्रा
10 टुक्रा मूल्य: 2145 अमेरिकी डलर प्रति टुक्रा
उत्पादनको नाम k11 10000w 72V ठूला पावर इलेक्ट्रिक स्कूटरहरू
कम्बो सेट प्रस्ताव गरिएको छ 0
ब्रान्ड नाम haibadz
मोडेल नम्बर k11x
चार्ज गर्ने समय 10 घण्टा
फोल्ड गर्न मिल्ने हो
दायरा प्रति चार्ज 90-110KM
अधिकतम गति 110km/h (सुरक्षा अन्तर्गत 90km/h भन्दा बढी छैन)
श्रेणी दुई पाङ्ग्रे स्कुटर
लागू हुने मानिसहरू युनिसेक्स
ब्याट्री 72V 42Ah: LG ब्याट्री उच्च क्षमता 18650 लिथियम ब्याट्री (ब्याच द्वारा) 72v 56ah: चीन ब्याट्री
मोटर पावर डबल ब्रशलेस मोटर, 72V 5000W*2， अधिकतम तात्कालिक आउटपुट 2000W
अधिकतम गति 110KM/घन्टा
सामग्री एल्युमिनियम + नायलन
रङ कालो + रातो
प्रदर्शन LCD बुद्धिमान प्रदर्शन
कुल वजन 70 केजी
अगाडि / पछाडि ब्रेक मोड: अगाडि र पछाडि HYD + तेल ब्रेक
व्हील साइज 11 इन्च-13 इन्च
अधिकतम लोड 150kg
प्याकिङ अवधि 1 टुक्रा दफ़्तीमा, प्याकिङ साइज: 1500*400*700mm
एलजी र सैमसंग ब्याट्री फरक धेरै जसो स्कुटरहरू lg ब्याट्री भएका छन्, केवल केहि Samsung ब्याट्री भएका स्कूटरहरूले तिनीहरूलाई थोरै पठाउँछन्। तर सैमसंग र एलजी ब्याट्री हो
कोरियाली र उही राम्रो ब्याट्री बाट समान। यही कारण हो कि मौलिक कारखानाले दुबै ब्रान्डको ब्याट्री प्रयोग गर्दछ। त्यसैले तिनीहरू उत्कृष्ट सुन्छन्।
ढुवानी गोदाम बारे नमस्ते, हामी यसलाई घर-घरमा पुर्‍याउन सक्छौं, र तपाईंले भन्सार निकासी शुल्क तिर्नुहुन्न।
हामीसँग युरोपमा गोदाम छैन, तर म यसलाई चीनबाट पठाउन सक्छु।
हामी यो मोडेल गोदाममा राख्नेछौं किनभने मेरो एजेन्ट युरोप गोदाम हो, जबकि हाम्रो मूल्य तिनीहरूको भन्दा सस्तो छ।
हामी DDP सेवा गर्न सक्छौं र तपाईंले सबै कुरा गर्नुहुन्न, त्यसैले पार्सल प्राप्त गर्नुहोस्।
भुक्तानी अवधि T/T अनलाइन, वेस्टर्न युनियन, L/C
यदि तपाइँ स्कूटर भन्दा धेरै मोटरसाइकल, कच्चा अनडिलुटेड पावरको साथ पल्स गर्ने केहि चीज खोज्दै हुनुहुन्छ, जुन स्कूटर उत्साहीहरूलाई यसको नामको मात्र उल्लेखमा विश्वव्यापी रूपमा लाल बनाउँछ, त्यहाँ कामको लागि एउटा मात्र मेसिन छ: k11। यो स्कूटरले हामीलाई दृढताका साथ चरम क्षेत्रमा तान्दछ किनभने म तपाईलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, यसले आधा गरेर केही गर्दैन।
यो स्कूटर गति र शक्तिको एक वास्तविक उस्ताद हो, र यो सबै यसको अत्यधिक ठूला BLDH हब मोटरहरूबाट आउँछ जसले अधिकतम शक्तिको कपाल उठाउने 10000W दिन्छ। यदि हामीले यसलाई तल उमालेर, यसको मतलब तपाईं 80 माइल प्रति घण्टाको उच्च गतिमा पुग्न सक्षम हुनुहुनेछ। यो मैले समीक्षा गरेको सबैभन्दा छिटो स्कूटरहरू मध्ये एक हो र 20 माइल प्रति घण्टा 'चरम' मानिँदा स्कूटर टेक कति टाढा आएको छ भनेर देखाउँछ।
यो सूचीमा k11 जस्तै गति बढाउने अन्य कुनै स्कूटर छैन। यसको पिकअप दर अचम्मलाग्दो छ र यदि तपाइँसँग तपाइँको बारेमा एक इन्च स्पीड फ्यान्ड छ भने, तपाइँ एक पटक यो खराब केटामा जानु भएको छ, कुनै अन्य स्कुटर तुलना गर्न सक्दैन। यसले निकालेको टर्क पनि उस्तै उग्र छ र यसले लगभग ७०% पहाडहरू मापन गर्न सक्षम बनाउँछ। यसको मतलब यो हो कि शहरहरूको सबैभन्दा ठाडो ठाउँमा (सान फ्रान म तिमीलाई हेर्दै छु) यो जनावरको पखेटामा हावा हुँदा मौका पाउनेछैन।
जब तपाइँ एक स्कूटर संग काम गर्दै हुनुहुन्छ जुन यो एक को रूपमा छिटो जान सक्छ, तपाइँ निश्चित हुन आवश्यक छ कि तपाइँ एकदम छिटो ढिलो गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यबाद, मिनी मोटर्सले गतिलाई जति नै सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन्छ। k11 मा वैकल्पिक ABS सहित डुअल हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक लगाइएको छ। यी, मेरो विचारमा, तपाईंले प्राप्त गर्न सक्ने उत्तम ब्रेकहरू हुन् र तिनीहरूले धेरै सहज र सटीक ब्रेकिङ अनुभव प्रदान गर्छन्। तपाईं जति छिटो जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराले फरक पार्दैन, तपाईंले सधैं आफ्नो नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ र हात लिभरहरूमा अलिकति दबाबको साथ पनि रोक्न सक्षम हुनुहुन्छ जस्तो महसुस गर्नुहुनेछ।
k11 मा निर्माण बमप्रूफको नजिक छ जति तपाईं यसको दोहोरो-मोटर पावरसँग सामना गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्कूटर सबै ठूला कम्पोनेन्टहरूको बारेमा हो जसले यसलाई अनाड़ी र ठट्टाको सट्टा स्टाइलिश रूपमा ठूलो महसुस गराउँदछ। स्टेम बाक्लो र बक्सी छ जबकि डेक उत्कृष्ट सन्तुलन प्रदान गर्न पर्याप्त प्रशस्त छ जबकि अझै पनि सवारहरूलाई प्राकृतिक खडा पोज अपनाउन अनुमति दिन्छ। समग्रमा, निर्माण गुणस्तर कडा र बलियो छ, राइडरहरूलाई 265 lbs सम्म सुरक्षित राख्दै।
टायरहरू, एक विशाल 13 इन्च मापन, प्रस्ताव मा केहि सबैभन्दा ठूलो हो। तिनीहरूको फाइदा यो तथ्यमा निहित छ कि तिनीहरूले कुनै पनि सडक अवरोधहरू लिन सक्छन्, प्रभावहरू अवशोषित गर्न सक्छन् र सबै आकार र आकारका खाल्डाहरू माथि सहजै घुम्न सक्छन्। ठूला टायरहरूलाई समायोजन हुन केही समय लाग्ने छ — k13 मा भएका टायरहरू जस्तै। घुमाउँदा झन् झन् झन्झटिलो महसुस हुन सक्छ, तर तपाईंले यो सिकाइ कर्भसँग व्यवहार गरिसकेपछि, k11 ले उत्प्रेरित गर्ने सहज, तैरिरहेको अनुभूतिको कदर गर्न गाह्रो हुनेछैन।
यसको आरामदायी सवारी पनि यसको अविश्वसनीय निलम्बनमा आउँछ। यो डुअल कोइल-ओभर हाइड्रोलिक झटकाहरूसँग सुसज्जित छ जुन तपाईंको वातावरणमा समायोजन हुन्छ, आवश्यकता अनुसार नरमको बीचमा वैकल्पिक। यसमा एक अभिनव समायोज्य स्टीयरिङ डम्पर पनि छ। यस प्रकारको चीज सामान्यतया मोटरसाइकलहरूमा पाइन्छ तर k11 जस्ता उच्च-गतिको मेसिनको लागि राम्रोसँग काम गर्दछ, स्टेम र ह्यान्डलबारहरूलाई स्थिर बनाउँछ र तपाईंले त्यो इष्टतम 80 माइल प्रति घण्टा हिर्काउँदा तिनीहरूलाई डगमगाउनबाट रोक्छ।
यसको दुई मोन्स्टर मोटरको सम्भाव्यतासँग सम्झौता गर्न, X ले एलजी सेलहरू सहितको 72V 55Ah ब्याट्री प्याक समावेश गर्दछ। यसले 110 माइलको लगभग अकल्पनीय अधिकतम दायराको प्रतिज्ञा गर्दछ जुन सस्तो डुअल-मोटर विकल्पहरूको तुलनामा अभूतपूर्व हो। सबै स्कूटरहरू जस्तै, आक्रामक सवारीले यसलाई कम गर्नेछ, तर तपाइँ अझै पनि प्लग इन गर्ने बारे सोच्नु भन्दा पहिले घण्टा बाहिर खर्च गर्न सक्षम हुने आशा गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा राम्रो पक्ष? जब तपाईले रिचार्ज गर्नु पर्छ, द्रुत चार्जरले तपाईलाई 8 घण्टामा सडकमा फिर्ता ल्याउनेछ।
ककपिट सेटअपको सन्दर्भमा, हाइबाड्जले सधैं लोकप्रिय EYE डिस्प्ले सुविधा दिन्छ, जसले तपाइँलाई एकै नजरमा तपाइँको प्रमुख सवारी तथ्याङ्कहरूमा नजर राख्न र साथै सवारी प्रदर्शनलाई अनुकूलन गर्न अनुमति दिन्छ। यो मेरो मनपर्ने सुरक्षा सुविधाहरू मध्ये एकको साथ पनि आउँछ - फिंगरप्रिन्ट रिडर, राइडरहरूलाई उनीहरूको स्कूटर अनलक गर्न अनुमति दिन्छ।
k11 मैले समीक्षा गरेको सबैभन्दा राम्रोसँग प्रज्वलित स्कूटरहरू मध्ये एक हो, रातमा सवारी गर्दा तपाईंलाई सुरक्षित राख्नको लागि प्रकाशको आतिशबाजी प्रदर्शन। अल्ट्रा-उज्ज्वल हेडलाइटले बाक्लो अँध्यारोलाई काट्छ, जबकि स्वैग लाइटहरू र पछाडिका बत्तीहरूले अन्य सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई तपाईंको दृश्यता बढाउँछन्। यो पालो संकेतहरूको साथ पनि आउँछ। मैले पहिले उल्लेख गरेझैं, यी स्कूटरहरूमा देख्न दुर्लभ छन्, तर व्यस्त सडकहरू नेभिगेट गर्दा ठूलो फाइदा।
यो स्कूटर एक निरपेक्ष सपना हो, तर यो केहि कमजोरीहरु संग आउँछ। यी मध्ये पहिलो यसको विशाल थोक हो। मेसिनको यो ट्याङ्कीको तौल १४५ पाउण्ड हुन्छ, जुन लगभग वयस्क कौगर जत्तिकै हुन्छ। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, यो उठाउन सजिलो छैन र सम्भावनाहरू छन्, तपाईंलाई मद्दत चाहिन्छ।
दोस्रो, यो अनुभवहीन वा बेहोश हृदय भएकाहरूको लागि स्कूटर होइन। शीर्ष गति एक्लै यसलाई नियन्त्रण गर्न अभ्यास गरिएको हात चाहिन्छ, र यो ठूलो पाङ्ग्राहरूको लागि यसको अद्वितीय ह्यान्डलिंग धन्यवाद उल्लेख नगरी हो। k11 को लागत $2,999 अचम्म लाग्दो छ भन्ने तथ्यले यसलाई अझ बलियो बनाउँछ। सम्भावनाहरू छन्, यदि तपाईं आफ्नो चरम स्कूटर खेललाई महत्त्वपूर्ण रूपमा अपग्रेड गर्न खोज्दै गम्भीर उत्साही हुनुहुन्छ भने मात्र तपाईं यति धेरै पैसा खर्च गर्न चाहानुहुन्छ।
सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, k11 एक प्रकारको मेसिन हो। यसले बाहिर राखेको पूर्ण शक्तिले यसलाई अत्यन्तै लोभ्य बनाउँछ। यदि तपाईं एक अनुभवी राइडर हुनुहुन्छ र अल्ट्रा-प्रदर्शन इलेक्ट्रिक स्कुटरहरूको चर्को उचाइमा पुग्न चाहनुहुन्छ भने, गति, शक्ति, दायरा र खराब मनोवृत्तिको सन्दर्भमा k11 लाई टक्कर दिन सक्ने अर्को कुनै स्कूटर छैन।
Q: तपाईं एक कारखाना वा व्यापार कम्पनी हो?
A: हामी पेशेवर निर्माता हौं जसको अटो पार्ट उद्योगमा १० बर्ष भन्दा बढी इतिहास छ।
प्रश्न: तपाईको कारखाना कहाँ अवस्थित छ? म त्यहाँ कसरी भ्रमण गर्न सक्छु?
A: हाम्रो कारखाना शेन्जेन शहर, चीन मा स्थित छ। तपाईं सिधै शेन्जेन एयरपोर्टमा उडान गर्न सक्नुहुन्छ, र हामी तपाईंलाई उठाउनेछौं। हाम्रो कारखाना भ्रमण गर्न स्वागत छ।
प्रश्न: म तपाइँको लागि कसरी तिर्न सक्छु?
A: हामी लगभग मोडको भुक्तानी स्वीकार गर्छौं: वेस्टर्न युनियन, Paypal, बैंक...
Q: तपाईंको कारखानाले गुणस्तर नियन्त्रणको सन्दर्भमा कसरी गर्छ?
A: गुणस्तर प्राथमिकता हो। हामी जहिले पनि सुरुदेखि अन्त्यसम्म गुणस्तर नियन्त्रणलाई ठूलो महत्त्व दिन्छौं।
हाम्रो कारखानाले CE, FCC, ROHS प्रमाणीकरण प्राप्त गरेको छ।
तपाईंको भ्रमणको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, यदि तपाईं हाम्रा उत्पादनहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, कृपया कुनै पनि समयमा नहिचकिचाउनुहोस् र मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, शुभकामना!
अघिल्लो: आउटडोर खेलकुद इलेक्ट्रिक स्कूटर ट्रोटिनेट इलेक्ट्रीक वयस्क
अर्को: patinete electrico इलेक्ट्रिक स्कूटर 84V चीनबाट
ट्रोटिनेट इलेक्ट्रीक मारोक, ट्रोटिनेट इलेक्ट्रीक पेरिस, ट्रोटिनेट इलेक्ट्रीक प्रिक्स
USB पोर्ट 20000W 84v भएको २ पाङ्ग्रा इलेक्ट्रिक स्कूटर
20000W स्कूटर फोल्डेबल स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर ...
नयाँ आगमन 84v 20000w इलेक्ट्रिक स्कूटर Foldab...
20000w 72V 80Ahour इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल इलेक्ट्रिक...
चीन कारखाना नयाँ स्कूटर 84v 20000w इलेक्ट्रिक Sc...
मूल ट्रोटिनेट इलेक्ट्रीक फोल्डेबल लाइटवे...